Trano fonenana ao Thailand ~ Journey-Assist Hotely, trano fandraisam-bahiny, trano
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Trano fonenana ao Thailand
Misafidy hotely iray any Thailand
Tsy azo atao mihitsy ny manome torohevitra momba ny hotely manokana any Thailand, satria zava-dehibe amin'ny olona samihafa ny anton-javatra samihafa. Ny hotely iray dia mety tsara ho an'ireo fianakaviana miaraka amin'ny ankizy, ny iray hafa mety kokoa ho an'ny tanora, ary ny fahatelo - ho an'ny be taona.
Ny vidiny dia io angamba no antony lehibe hisafidianana hotely. Ny vidin'ny fitsangatsanganana dia miankina amin'ny vidin'ny fijanonan'ny alina iray. Mandritra izany fotoana izany, ny masoivoho fitsangatsanganana dia manao sonia fifanarahana amin'ny hotely, izay vokatr'izany dia mihena ny vidin'ny fijanonan'ny andro iray noho ny vidin'ny ofisialy izay samy eo amin'ny tranokalan'ny hotely na amin'ny tranonkala manokana ho an'ny toeram-ponenana, izay anaovana ny mombamomba ny hotely.
Rehefa mifidy trano fandraisam-bahiny dia mila mamaritra ny vola lany amin'ny trano hipetrahana na tapakila iray ianao. Avy eo tokony hisafidy ireo safidy mety amin'ny teti-bolanao ianao, manilika vola be, ary koa mampiahiahy.
Ohatra, ho an'ny 300-700 baht dia afaka manofa trano kely tsy hisy ahirany. Indraindray aza tsy hita ny sakafo maraina, ary any ivelany ny efitrano fidiovana. Ny vidin'ny efitrano ho an'ny trano fandraisam-bahiny telo kintana dia eo anelanelan'ny 800 ... 2 000 baht, mazàna manome buffet sakafo maraina izy ireo araka ny serivisy mahazatra. Ao amin'ny trano fandraisam-bahiny efatra sy dimy kintana dia manomboka ny vidiny amin'ny 2 500 baht sy ambony kokoa, ny serivisy ao amin'izy ireo dia amin'ny ambaratonga somary avo lenta, matetika ny hotely dia misy spa, trano fisakafoanana ary klioba ankizy.
Aza matahotra ny manoratra safidy misafidy kely kokoa noho ny teti-bola nomanina ao amin'ny lisitry ny lisitra, satria mety ho dinihina tsara raha toa ny fihenam-bidy. Ny dingana voalohany amin'ny fifidiana dia mety hitarika amin'ny lisitry ny hotely 20-40. Avy eo afaka manohy screening ianao amin'ny fampiasana ireto tranga manaraka ireto.
Ny antony lehibe iray dia ny toeran'ny toerana. Ny akaikin'ilay trano fandraisam-bahiny dia mankany amoron-dranomasina na amin'ny faritra afovoan-tanàna, ny lafo lafo kokoa. Ilaina ny manapa-kevitra hoe inona no zava-dehibe indrindra aminao: fampiononana ao anaty efitrano na efa manakaiky ny afovoany sy / na tora-pasika.
Ohatra, afaka mahita trano fandraisam-bahiny tsara ianao, izay dia 30-minitra mandeha amin'ny trano fisakafoanana sy fivarotana akaiky indrindra, fa tena manakaiky tokoa amoron-dranomasina. Rehefa mifidy hotely amin'ny nosy kely iray dia tokony hoheverinao ny fotodrafitrasa amoron-dranomasina, ny fisian'ny onja amin'ny fotoana voafaritra sy ny ebbs matanjaka.
Tsy mitovy i Thailandy amin'ny tsy fandraisan'ireo hotely amin'ity firenena ity ny rafitra ofisialy miaraka amin'ny kintana maro samihafa. Misy tarehimarika sasany no fototry ny fanendrena kintana manokana amin'ny hotely iray. Ohatra, toeram-pivarotana spa eo amin'ny tranokala dia ahafahanao mampiavaka azy amin'ny kintana efatra lehibe. Na izany aza, ny trano fandraisam-bahiny telo kintana amin'ny fampiononana dia hanohitra ireo trano fandraisam-bahiny efatra tsy lafo. Tsy afaka manantona zava-dehibe loatra amin'ny isan'ny kintana ianao.
Raha zohina aloha dia toa tsy manana anjara toerana misafidy hotely ilay anarana. Na izany aza, fomba fihevitra mampiadihevitra ity. Eny tokoa, indraindray ny teny lehibe, ohatra, Palace na Resort dia afaka manintona ny saina. Na izany aza, raha ny marina, matetika ny hotely toy izany dia tsy dia mahafaly toy ny eritreritrao. Lapa matetika ny lapa ary ny Resort dia matetika trano fandraisam-bahiny mahazatra - trano fonenana misy serivisy serivisy tsy misy sakafo maraina.
Arahina ny hanomezana safidy ny trano fandraisam-bahiny amin'ny alàlan'ny hotely, ao amin'izy ireo ny haavon'ny serivisy. Ohatra, amin'ireo hotely kintana dimy any Thailand, ny malaza indrindra dia i Radisson, Le Meridien, Renaissance, Marriott, Anantara, Hilton, Four Seasons, Aman Resorts, Hyatt, Dusit Thani, Banyan, Sofitel, Swissotel, Pullman, Mövenpick, Outrigger.
Amin'ireo hotely misy kintana efatra, Novotel, Double Tree nataon'i Hilton, Mercure, Ramada, Holiday Inn, Centara, Best Western no mendrika ny hisarika ny saina indrindra.
Ao anatin'ireo hotely kintana telo kintana, ny iray dia afaka manome soso-kevitra ny Citin, Ibis, Sawasdee & Woraburi, Tune, Red Planet, Check Inn, Sugar Palm.
Tsy misy isalasalana fa ny serivisy ho tsara indrindra amin'ireto hotely ireto. Raha manana safidy eo anelanelan'ny trano fandraisam-bahiny tsy misy tambajotra sy tambajotra ianao, eo ho eo dia mitovy amin'ny toetoetrany dia tokony ho aleonao tokoa ilay farany.
Mba hamaritana tsara ny haavon'ny fampiononana ao amin'ny hotely iray amin'ny sary dia mila fanandramana be dia be ianao. Mila mahay mamantatra ny fanaka efa lany andro ianao, ny fomba Thai tsotra amin'ny atitany, ny karipetra (indraindray - feno fofona) ary ireo fofona hafa. Na izany aza, ho an'ny fanandramana rehetra, dia sarotra ny mamaritra avy amin'ny sary raha misy vovoka eo amin'ny zoro ao amin'ny efitrano, na misy misy akoho miditra ao. Na izany aza, azo atao tsara ny manao famaranana ankapobeny.
Rehefa nifidy hotely maromaro mety hisafidy hitoeranao ianao, ka raisina an-tsoratra ny zavatra tsirairay avy etsy ambony, mendrika ny hamaky ireo famerenana efa nosoratan'ny mpizahatany hafa. Misy valiny maro toy izany amin'ny tranokala Booking.com, accommodation, TopHotels.ru, TripAdvisor.ru, Otzyv.ru. Ao amin'ny tranokala HotelLook sy RoomGuru, ankoatry ny fijerena ny vidin'ny hotely dia afaka mahita hevitra ihany koa ianao.
Koa satria misy famerenana marobe, ianao aloha dia tokony handinika aloha ny ratsy. Tsara homarihina ny hoe inona no mpizaha mpizahatany tsy mahafa-po, fa zava-dehibe ny mandinika ny daty mipetraka. Ohatra, raha nisy olona naneho tsy fahafaham-po amin'ny kalitaon'ny fanaka 4 taona lasa izay, fa 1 taona lasa izay dia nanamboatra ny trano fandraisam-bahiny izy ireo, dia tsy azo inoana fa hita taratra ny zava-misy ankehitriny.
Vidiny ho an'ny trano fonenana any Thailand
Thailand dia firenena manana fisafidianana fipetrahana be dia be, saingy tokony ho fantatrao ny fihenan'ny sasany. Noho izany, lafo ny trano, izay ahafahanao mandeha amoron-dranomasina haingana. Any amin'ny faritra maro, manomboka ny volana novambra ka hatramin'ny martsa, rehefa milentika ny toetr'andro ary milamina ny ranomasina, miakatra avo 1,5-3 ny vidin'ny trano manofa trano. Ohatra, ny vidin'ny fanofa trano iray dia:
Raha ny fifanarahana isan-taona - 18 000 baht isam-bolana (eo amin'ny 514 dolara).
Raha misy ny fifanarahana mandritra ny volana maromaro manomboka ny volana novambra ka hatramin'ny martsa - 25 baht isam-bolana (eo ho eo amin'ny 000 dolara).
Mandritra ny 1 volana amin'ny ririnina - 35 000 baht (manodidina ny 1 000 eo ho eo).
Mba hijanonana ao Thailand mandritra ny volana maromaro na mihoatra, dia afaka manofa ireto trano fonenana manaraka ireto ianao:
Efitra iray ao amin'ny hotely na fandriana iray ao amin'ny hostel.
Efitra hotely iray (mety manana kitchenette izy, ary mety tsy misy fepetra ho fandrahoan-tsakafo).
Trano io trano fananganana.
Tranon-trano (misy trano amina endrika isan-karazany ary misy fraikitra samy hafa).
Villa miaraka amin'ny dobo.
Safidin'ny trano malaza iray eto amin'ity firenena ity dia condominium. Izany dia trano fonenana amin'ny trano fonenana, trano fandraisam-bahiny amin'ny studio amin'ny faritra kely (eo ho eo amin'ny 33-35 s. M.), Miaraka amin'ny efitrano kely iray, izay akambana amin'ny lakozia, ary efitrano miserana misy efitrano fandraisam-bahiny.
Ny vidin'ny trano rehefa manofa trano any Thailand dia ambany kokoa noho ny ankamaroan'ny tanàna ao amin'ny Federasiona Rosiana. Io fahasamihafana io dia tena voamarika rehefa misy olona roa na maromaro mipetraka ao amin'ny trano iray ihany. Ny safidy tena lafo indrindra dia trano fandraisam-bahiny ao amin'ny studio, izay mipetraka ao amin'ny trano fonenana iray. Ny vidiny dia voafaritra amin'ny antony maro, ao ny toerana. Ohatra, any Pattaya, ny trano toy izany dia mitentina 7 ka hatramin'ny 000 baht isam-bolana (raha maka kely iray ianao - manana faritra 8 sq. M, ary any akaikin'ny ranomasina). Miaraka amin'ny fotoana hanakarama lava kokoa dia mety ahena ny saram-bolana. Any Chiang Mai, ohatra, dia misy trano 000-litatra isam-bolana amin'ny vidin'ny trano.
Ny mpanjifa iray manofa trano dia tsy maintsy mandoa volavolan-tena. Iray volana ny vanim-potoana fanofaanana ambany. Afaka manandrana manofa trano mandritra ny roa herinandro ianao, nefa tsy maintsy mandoa ny vola mitovy amin'ny iray volana.
Rehefa manofa trano iray, dia tokony ho tsaroana fa studio iray amin'ny efitrano iray matetika tsy misy lakozia. Ankoatr'izany, matetika na dia any amin'ny efitra fandraisam-bahiny indrindra aza mety tsy hisy efitrano mahazatra mahazatra antsika.
Ny fanofa trano voajanahary manana fanaka kely, miaraka amin'ny dobo filomanosana ao Phuket, ohatra, dia mandany vola 10 000 farafahakeliny isam-bolana. Rehefa mifidy karazana trano, ankoatry ny manofa trano dia ilaina ny manisy tahiry, ny sandany izay amin'ny tranga mahazatra dia mitovy amin'ny sandan'ny iray volana hofan-trano. Rehefa tapitra ny fifanekena, dia miverina any amin'ny fiarakaretsaka ny tahiry, raha tsy izany dia mazava ho azy, nahatonga fahavoazana ara-nofo ho an'ny tompon'ny trano. Raha mbola nitranga izany dia hatsahatra amin'ny vola ny vola fanamboarana. Zava-dehibe: ny fandoavam-bola amin'ny tompon-trano dia tsy maintsy miaraka amin'ny famoahana ny fidiram-bola amin'izy ireo.
Vidiny fanampiny rehefa manofa trano
Ny vidin'ny herinaratra ao Thailand dia tena avo be raha oharina amin'ny taloha USSR. Mandoa $ 150 ny volavolan-jiro isam-bolana, mihoatra ny 200 $. Ny «gluttony» indrindra dia ny rivotra (indrindra fa ny antitra), fatana mandeha amin'ny herinaratra ary milina fanasana.
Mba hahitana safidy mety, dia tokony hofidinao aloha hoe inona no laharam-pahamehana:
Fampiononana na toekarena.
Ny maha izy azy amin'ny ranomasina na ny maha akaiky azy.
Ny fahazoana mahandro sakafo na ny fisafidianana tsara ny toeram-pisakafoanana eo akaiky eo.
Zava-dehibe ny hananana fiara fitaterana olona (fiara manofa fiara na bisikileta).
Rehefa nanapa-kevitra momba ireo olana ireo ianao dia azonao atao ny mametra ny fikarohana ataonao amin'ny karazana trano iray ao amin'ny faritra iray manokana.
Ka raha tena zava-dehibe ny famonjena dia afaka tonga any Thailandy ianao mandritra ny vanin-taona orana, dia mitadiava trano kely amin'ny studio (miaraka amin'ny efitrano iray, anisan'izany ny lakozia sy ny efitrano fatoriana) amin'ny 6 - 000 baht (avy amin'ny 8 hatramin'ny 000 dolara). Na izany aza, ny trano fonenana mora tahaka izany dia tsy lavitra ny ranomasina (ohatra, fiara 170 minitra) na manana endrika tsy dia manintona loatra.
Noho izany, ny manofa trano vaovao roa voalalotra marevaka, izay misy 15 minitra mankany amin'ny morontsiraka, dia mitentina 15 baht (manodidina ny $ 000) miaraka amin'ny fifanarahana fanao isan-taona, raha mandray an-tanana ny fandoavam-bola alain'ny vahiny. Azo atao, ohatra, ny manofa trano misy efitra tokana amin'ny toerana mangina iray 428 minitra miala ny morontsiraka amoron-dranomasina 30 baht (eo ho eo $ 13, miaraka amin'ny herinaratra sy Internet), saingy amin'ity tranga ity dia mety mila mividy trano an-dakozia ianao. vata fampangatsiahana ary fatana. Any Pattaya sy ny faritra avaratr'i Thailand, ny vidin'ny trano dia mety ho 000-371 isan-jaton'ny ambany noho ny any amin'ny faritra hafa ao amin'ny firenena.
Ny fikarohana trano fividianana trano any Thailand dia afaka manampy loharano fanta-daza amin'ny famandrihana Booking.com. Ny sasany tamin'ireo dia nandehandeha sy nonina teto amin'ity firenena ity mihoatra noho ny indray mandeha nitady trano hofan-trano arakaraka ny nahatongavan'izy ireo. Saingy, noho izany dia mila mihazakazaka manodidina ny arabe ianao, mitady dokambarotra manofa trano, ary rehefa avy mahita safidy mety - antsoy ny tompony (izay mahay mandalina be amin'ny teny anglisy) ka miandry olona ho avy hanoro anao ny atiny. Matetika andro ny fikarohana toy izany dia maharitra andro maromaro.
Serivisy tsara iray hafa ho an'ny fikatsahana trano hofidina dia ny Airbnb. Ao amin'ity vavahadin-tserasera ity, ny tompon-trano dia mamorona doka ho an'ny trano sy trano fonenany. Ny iray amin'ireo fitsipika amin'ity serivisy ity dia ny tompon'ny trano ihany, izany hoe olona tsy miankina fa tsy orinasa no afaka mametraka dokambarotra. Ny Airbnb dia manamarina ny trano sy ny trano rehetra ary ny tompona rehetra, mitaky ny hanangona ireo antontan-taratasy maro. Noho izany, ny fampiasan'ny mpanelanelana sy mpisoloky dia voataona.
Saingy, ny famandrihana trano lavitra be dia be ihany koa:
Matetika tokoa ny zava-misy dia tsy mifanentana amin'ny dokambarotra: ny mitafy trano dia mety hihoatra ny haavony aseho amin'ny Internet, indraindray kosa ny 1 km mankany amin'ny ranomasina, ary tsy 200 m, ary ny fivarotana voafaritra dia tsy nisy teo akaiky teo.
Betsaka ny fanontaniana manan-danja tsy azo hazavaina: mampihoron-koditra ny toerana misy anao, iza no mpifanila trano iarahanao mipetraka, inona ireo foto-drafitr'asa akaiky.
Ny algorithm tsara indrindra amin'ny fitadiavana trano sy fanofa trano toa izao:
Alohan'ny hahatongavana any Thailand dia mila mametraka efitrano fandraisam-bahiny mandritra ny 3 alina. Mandritra io vanim-potoana io, azo atao ny mahita safidy mety hitoerana bebe kokoa.
Raha mikasa ny hamerina hijery ny habetsaky ny safidy fonenana ao amin'ny toeram-ponenana samihafa ianao mba hisafidianana ny tsara indrindra, dia afaka manofa fiara na bisikileta ianao. Raha tsy misy ny drafitra toy izany ary mila trano ao an-tanàna na tanàna iray fotsiny ianao dia afaka mahita izany mandritra ny fitsangatsanganana mahazatra manodidina ny manodidina.
Izay tanàna misy morontsiraka fizahan-tany dia lalana iray lehibe izay misy arabe maro izay miala amin'izany. Ilaina ny mifantoka amin'ny soratra "for rent".
Zava-dehibe iray manan-danja: matetika ny tompon-trano miantso ny vidin'ny mety ho tompon-tany azo antoka, tarihin'ny fihetseham-po izay mivoaka avy amin'ny mpanjifa iray manokana: ny iray dia azo antsoina hoe vidiny iray, ny iray hafa - indroa mihoatra ny latsaka. Tokony ho maotina kokoa izy io, tsy hampiseho fa afaka be dia be ianao, anisan'izany raha tena izy. Tena ilaina ny manontany ny tompona trano kafe sy ny fiara kely sy ny fanofana bisikileta raha ny namany iray no manofa trano. Ity no safidy fanararaotana tena mahasoa. Tena tsara soso-kevitra ny hihena foana ny tenanao.
Trano any amin'ireo faritra voafantina tany Thailand
Ity trano fandraisam-bahiny ity dia misy vidin'ny trano ambany raha ampitahaina amin'ny Phuket. Ny trano fandraisam-bahiny tsara ao amin'ny condominium misy dobo dia mitentina 8 ka hatramin'ny 000 baht isam-bolana. Ny vidin'ny fanofaina dia voafaritra amin'ireto antony manaraka ireto:
Ny masoivoho mpampindram-bola dia mitondra masoivoho maro sy orinasa mpitantana. Tsirairay amin'izy ireo dia manampy ny vaomiera sasany amin'ny vidin'ny fanofa. Ny vidiny tsara indrindra dia miaraka amin'ny tompon'ny mivantana.
Manakaiky ny ranomasina. Ny maha akaiky azy dia ny avo kokoa ny vidiny. Mandritra izany fotoana izany, ny morontsiraka Pattaya dia tsy mety milomano mihitsy. Raha te ho eo akaikin'ny tora-pasika ianao, dia tokony hijery akaiky kokoa any amin'ny toerana hafa.
Season. Ny vanim-potoana avo dia maharitra hatramin'ny Oktobra ka hatramin'ny Febroary. Amin'izao fotoana izao, avo kokoa ny sandan'ny fanofa trano ao Pattaya.
Fotoana mampanofa trano - ny avo kokoa dia ambany, ny vidiny. Ohatra, ny vidin'ny trano mahazatra mahazatra ao amin'ny condominium ao Pattaya dia 13 baht isam-bolana, na izany aza, rehefa manofa 000 volana dia hihena ho 6 baht ny vidiny isam-bolana, ary amin'ny fanofa-trano isan-taona - hatramin'ny 11 baht isam-bolana.
Raha ny fanofa trano maharitra trano na trano (mandritra ny iray volana na mihoatra) dia matetika ampiana amin'ny vidin'ny fanofa trano ny vidin'ny rano sy ny herinaratra. Raha ny salanisa, ny vidin'ny 1 kWh dia 5 baht, ary ny vidin'ny 1 metatra metatra. m ny rano (any Thailandy, ireo roa ireo dia antsoina hoe "unit") dia 35 baht.
Matetika raha ny fisavana amin'ny Airbnb dia tafiditra ao amin'ny tompony ny fitaovana rehetra amin'ny vidin'ny fanofa.
Ny faritra samihafa any Pattaya dia samy hafa ny vidin'ny trano, na, ohatra, eo anelanelan'ny faritra Phuket aza, mbola misy dikany kokoa io fahasamihafana io. Inona no tokony hohenoinao rehefa mifidy fananana ao Pattaya:
Ny alina an-tampon-tanàna dia tsy matory amin'ny alina. Feno feo manaitaitra foana izy ireo mandritra ny famantaranandro.
Raha mikasa trano maharitra any Pattaya ianao, dia tokony handinika ny fotodrafitrasa akaiky indrindra (fivarotana, tsena, sakafo) ary fitaterana.
Ho an'ny fandalinana lavitra ny faritra dia afaka mampiasa ny serivisy Google Street View ianao.
Phuket - Lafiny amin'ny trano fanofa trano
Phuket no faritra lafo vidy indrindra any Thailandy raha ny vidin'ny trano.
Mirotsaka ny vanim-potoana lehibe amin'ny Janoary-Febroary. Miakatra ny vidiny mandritra ireo volana ireo.
Ny manofa trano na trano rehefa vita ny fifanarahana mandritra ny enim-bolana na mihoatra dia mazàna mora kokoa amin'ny 20-30% isam-bolana.
Miankina mivantana amin'ny ranomasina ny vidiny. Na izany aza, raha afaka mitaingina bisikileta ianao, dia mandoa vola be loatra amin'ny maha-lavitra ny trano fandraisam-bahiny dia tsy mitombina.
Halaviro ny mpanelanelana, indrindra indrindra avy amin'ireo firenena miteny Rosiana. Nanala baraka ny vidin'ireo mpiray tanindrazana aminy izy ireo, nanararaotra ny ankamaroany fa tsy nahay anglisy.
Ny vidin'ny herinaratra sy ny rano dia mety miovaova amin'ny toerana samihafa any Phuket.
Aleo aza misafidy trano fonenana izay lavitra be (farafaharatsiny 100 m) manomboka amin'ny lalana lehibe, tsena ary sekoly.